Bahrain: Afaka Miara-miaina ve ny Demôkrasia sy ny Finoana Silamo? · Global Voices teny Malagasy
Bahrain: Afaka Miara-miaina ve ny Demôkrasia sy ny Finoana Silamo?
Voadika ny 31 Oktobra 2018 20:11 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, Ελληνικά, বাংলা, اردو, አማርኛ, عربي, Français, English
Afaka mipetraka anatin'ny fiarahamonina Silamo ve ny demôkrasia? Izany no fotodresaka teo amin'ireo bilaoera Bahraini androany.
Nametraka io olana io ilay mpanakanto Bahraini, Al Shaikh, rehefa nibitsika hoe [ar]:
@Anas_Al_Shaikh: sarotra ny manasaraka ny pôlitika sy ny finoana anatin'ireo fiarahamonina Silamo ary izany no antony mahatonga ny demôkrasia tsy hahomby mihitsy na dia hanoratra ny lalàmpanorenana tsara indrindra sy hanaiky ny fifandimbiasa-pahefana am-pilaminana aza isika.
Mamaly i Fearless Ba7rainia:
@fearlessbahrain: ny demôkrasia no vahaolana sady fanafodin'ny olana toy izao. Raha hatsaraina ny lalàna, hivoatra ho azy koa ny vahoaka. Fiarahamonina sivily no hanavotra ny vahoakantsika.
Manana fijery hafa ilay Bahraini mpanao gazety, Abbas Busafwan. Mamaly ilay bitsik'i Al Shaikh tany am-boalohany izy ary milaza fa:
@abbasbusafwan: mankarary ity tsoakevitra ity. Fanaovana bango tokana izany. Lavorary angamba ny ohatr'i Tiorkia.
Mamaly i Al Shaikh:
@Anas_Al_Shaikh: Tsy nitsingilahila teo anelanelan'ireo olana ara-pinoana sy ara-pôlitika i Turkey. Ohatra, manana zo ho an'ny pelaka i Tiorkia, ary ny masoko izao no nahita azy ireo nanohitra tao amin'ilay arabe malaza, Taksim.
Ary ampian'i Ahmed Al-haddad:
@DiabloHaddad: Tsy mitovy amin'izy teo ambany fitarihan'i Ataturk i Tiorkia ankehitriny. Nitondra an'i Tiorkia aminà vanimpotoana mialoha an'i Ataturk i Erdogan malaza
Ho valin'izay, mihanihany i Busafwan:
@abbasbusafwan: Raha ny eritreritro dia i Arabia Saodita no ohatra tsara indrindra amin'ny demôkrasia, ny Shura, ny zon'Olombelona, ny Gazety malalaka, ary ny fandanjalanjana ny finoana sy ny pôlitika.
Manaiky i Abu Yousif fa tsy mety mifangaro ny pôlitika sy ny finoana:
@xronos2: Miombon-kevitra aho. Tsy tokony hafangarontsika ny finoana sy ny pôlitika satria hoe tsy manaiky ry zareo dia avy eo isika hivadika ho fitondrana mpamoritra tahaka an'i Iràna
Ary milaza i Abu Karim fa tokony hanatsara izay efa ananantsika isika fa tsy hampiditra demôkrasia avy any Andrefana:
@AbuKarim1: Ny olantsika dia te-hametraka ireo fotokevitra Tandrefana anatin'ny fiarahamonintsika fa tsy mikaroka izay efa ananantsika ka manao izay hanarahany ny toetrandro.